Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Fursadaha Fibreerka | Shiinaha Fiber Feejignaanta Warshad
Guudmarka Sanduuqan qaybinta noocyada '86' ah ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa shabakadda FTTX si loogu xiro fiilada dhibcaha iyo qalabka ONU iyada oo loo marayo dekedda fiber. Waxay taageertaa kala-bixinta, qaybinta, isku-xirnaanta farsamada iyo rakibidda darbiga. Awoodda sanduuqaani wuxuu noqon karaa 2cores. Astaamaha material Qalabka ABS ee la isticmaalay wuxuu hubiyaa jirka xoog iyo iftiin inst Qalab fudud oo fudud: Ku dheji darbiga operation Hawlgal fudud: fiilo fiiq leh oo aan u baahnayn in la furo qolofka ● Fibreelka fiilooyinka ee dhinac walba leh, oo taageeraya fiilooyinka fiilooyinka f ...
Xiritaanka OTC-S Fibre optical
Codsiga iyo Muuqaalka ● Waxaa loo isticmaali karaa si toos ah iyo codsi laan ah oo loogu talagalay fiilooyinka fiilooyinka leh Ku habboon anteenooyinka ama codsiyada darbiga ku dheggan; Ku celi ku habboonaanta furan; Qalabka loo yaqaan 'Slide-N-Lock fiber optic splice tray' oo leh xagalkiisa furitaankiisa oo ka sarreeya 90 ° C; ● Saxarada waa la kordhin karaa waana la yareyn karaa iyadoo la raacayo dalabka; Part Qaybta balaastigga ah waxay ka samaysan tahay caag PC-ga PC-ga-xoog badan leh, kaas oo hubiya waxqabad kaamil ah ka hortagga-binta iyo xoogga; Performan Waxqabadka buuxa ...
Xiritaanka OTC-O Fibre optical
Guryaha OTC-O waa wareegsan yihiin waxaana loo qaabeeyey qaab dhismeed istaag ah, kaas oo lagu hagaajiyay laguna xiray hoop gaar ah, oo si habboon ugu shaqeynayay. Waxaa jira afar meelood oo laga galo / laga baxo. Dekedda waxaa lagu xiray dabool. Ka dib markii fiilada la saaray dekedda, ka dib hoos u dhig furka fur, ka dibna dekedda ayaa la shaabadeyn doonaa. OTC-O waxay ku habbooneyd ilaalinta noocyada fiilooyinka, baaxadda dalabka waxaa ka mid ah anteenada, dhulka hoostiisa iyo dhuumaha. OTC-O wuxuu ka samaysan yahay xoog balaaran caaga injineernimada PC, w ...
Iskuduwaha Fibre Optic ee Horizontal (FOSC) OTC-M
1. Baaxadda codsiga Buuggan Rakibaadda ku habboon ee Xidhitaanka Fibre Optic Splice (Aakhiro oo loo soo gaabiyo FOSC), oo ah hagidda rakibidda habboon. Baaxadda dalabku waa: anteeno iyo derbi-dhejinta. Heerkulka jawigu wuxuu u dhexeeyaa -40 ilaa 65 ℃. 2. Qaab-dhismeedka aasaasiga ah iyo qaabeynta 2.1 Cabbirka iyo awoodda Cabbirka ka baxsan (LxWxH) 280x200x90 (mm) Miisaanka (marka laga reebo sanduuqa bannaanka) 1200g-1500g Tirada marinnada laga soo galo / laga baxo max. 4 xabbo Dhexroor fiilo xarig ah fiber8 — -14 ...
Xiritaanka OTC-J Fibre optical
Codsiga iyo Muuqaalka ● Waxaa loo isticmaali karaa si toos ah iyo codsi laan ah oo loogu talagalay fiilooyinka fiilooyinka leh Ku habboon anteenada, marinka, ama codsiyada la aasay; ● Ku soo celi roonaanta furan Slide-N-Lock fiber optic splice tray oo leh xagalkeeda furitaanka kor ku xusan 90 ° C; ● Saxarada waa la kordhin karaa waana la yareyn karaa iyadoo la raacayo dalabka; Part Qaybta balaastigga ah waxay ka samaysan tahay caag PC-ga PC-ga-xoog badan leh, kaas oo hubiya waxqabad kaamil ah ka hortagga-binta iyo xoogga; Performance Waxqabadka wanaagsan ee ...
Xiritaanka OTC-F Fibre optical
Hoyga OTC-F waa wareegsan yahay waxaana loo qaabeeyey qaab dhismeed istaag ah, kaas oo lagu hagaajiyay laguna xiray hoop gaar ah, oo si habboon ugu shaqeynayay. Waxaa jira lix dekedood oo laga galo / laga baxo. Dekedda waxaa lagu xiray shaashadda ilaalinaysa kuleylka. Ka dib markii fiilada la soo dhex mariyey dekedda, shaadhka ayaa kululaaday, ka dib dekedda waa la xirayaa oo fiilada ayaa la hagaajiyay. OTC-F waxay ku habbooneyd ilaalinta noocyada fiilooyinka, baaxadda dalabka waxaa ka mid ah anteenada, dhulka hoostiisa iyo dhuumaha. OTC-F waa ma ...
Xiritaanka OTC-E Fibre optical
Xiritaanka OTC-A Fibre optical
Bannaanka IP65 16ports FTTH sanduuqa terminal fiber-ka ayaa loo heli karaa qaybinta iyo isku xirka terminal-ka noocyada kala duwan ee nidaamka fiber optic, gaar ahaan ku habboon qaybinta shabakadda yar-yar, ee ay ku xiran yihiin fiilooyinka indhaha, dhejiska balastarka ama pigtails-ka. Astaamaha: Nooca aan xirnayn, oo lagu hagaajiyay bool. Laba dekedood oo xarig ah oo isku xira fiilada gudaha Fudud hawlgalka, waxay leedahay awood sare oo ay kujirto waxyaabo dheeri ah oo pigtails ah Waxay ku xirmi karaan / dib ugu xiri karaan adapters-ka wax ka badan 200 jeer isku xiraha ...